ရီယိုဒီဂျနေးရိုး - I LOVE RIO DE JANEIRO - ရီယိုပြည်နယ်
အရေးပါမှုနှင့်အရင်းအနှီးနှင့်နိုင်ငံတော်တပ်စွဲကြောင်းမြို့များ၏ဒါဇင်တို့အကြားဆက်ဆံရေးဟာ synergic အသိအမှတ်ပြုပြီး, ငါရီယိုနိုင်ငံတော်၏ကျော်ကြားသောနိုင်ငံမြို့တော်အပြင်ဘက်အိပ်ရသောအမြို့မြို့, ခရိုင်နှင့်လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းနှင့် ပတ်သက်. မျက်စိဖွင့်လှစ်သည့်အချက်အလက်များထောက်ပံ့ပေး LOVE ။
နိုင်ငံတော်အားလုံးသည် crevices နှင့်ထောင့်ဝှက်ထားလျက်, ယဉ်ကျေးမှု အစားအစာနှင့်လူမှုရေးကျောက်မျက်၏လိုက်စားအတွက်စူးစမ်းနေကြသည်။ အဆိုပါဝဘ်ဆိုဒ်သောပြည်နယ်တစ်ခုလုံးထည်စီပြဇာတ်အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍမှထုတ်ဖော်ပြောဆိုများစွာသောမူထူးခြားတဲ့တိုင်းဒေသကြီးများ၏သမိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်သာယာလှပသောရှုခင်းများစူးစမ်း။
ကိုရွေးနှုတ်သောသခင်နီးပါးများအတွက်အများဆုံးအထင်ကရကိုယ်စားသို့မဟုတ်ရီယိုနှင့်ဘရာဇီး၏တစျပွီခရစ်တော်၏ရှငျးရှငျးလငျးလငျးရုပ်ထုကြောင့်ရုပ်မြင်သံကြား, ရုပ်ရှင်များနှင့်များစွာသောခရီးသွားများအတွက် ရီယိုဒီဂျနေးရိုး မြို့၏ကမ္ဘာကျော်မြို့တော်ကိုအကြောင်းအရာ၏အယူအဆတခုရှိသည်မဂ္ဂဇင်းများသွားလာ၏ ရာစုနှစ်က။ ရီယိုရဲ့ Samba, ဘောလုံး, ကမ်းခြေနှင့်ပွဲတော်နေ့ပှဲကိုဆယ်စုနှစ်မီဒီယာဖြစ်ရပြီ။
ဘရာဇီးကပြင်ပမှာနေတုန်းပဲအဓိကအားဖြင့်အမည်မသိကြောင်းတိုင်းဒေသကြီး - ပြီးသားကျော်ကြားသည်အဘယ်အရာကိုကျော်လွန်တာကိုသိရဖို့ပိုပြီးနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဒေသများအတွက်အတွေ့အကြုံလည်းရှိ၏။ သဘာဝအလျောက်နှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအထင်ကရအဆောက်အလှပကမ်းခြေတွေ, တောင်ကြီး, နှင့်အစိမ်းကသဘာဝသိုက်၏စည်းစိမ်ကိုနေရာဖြစ်သည် - ရီယို, မြို့ကပိုအများအားရည်ညွှန်းသည်အတိုင်း, ရီယိုဒီဂျနေးရိုး မြို့၏ပြည်နယ်, တူညီတဲ့နာမတော်အားဖြင့်နိုင်ငံတော်တွင်တည်ရှိသည်။
26 ဖက်ဒရယ်ပြည်နယ်များတိုင်းပြည်ရဲ့မြို့တော် Brasilia ၏ဖက်ဒရယ်ခရိုင်နှင့်အတူစုစုပေါင်းဘရာဇီး, 27 ရှိပါတယ်။ ရီယိုဒီဂျနေးရိုး မြို့၏ပြည်နယ် Mina Gerais, Espíritoစန်တို, ဆောပိုလိုနှင့်အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာအားဖြင့်များ၏ပြည်နယ်များအားဖြင့်နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေသည်။
မြို့တော်ကိုပတျဝနျးကငျြ, ရီယိုဒီဂျနေးရိုး မြို့၏ပြည်နယ်တစ်ခုချင်းစီကဒေသတွင်းကြီးမြတ်လှည့်ခရီးသည်များနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွားအရပ်အမျိုးမျိုးမှမူလနေရာဖြစ်သည်။ အချို့ဒေသတွေမှာအိမ်ကစူးစမျးရှာဖှေရေးမပွုရသေးသောကျွန်းများနှင့်လျှို့ဝှက်ကမ်းခြေရှိနေစဉ်, အခြားဒေသတွေမှာရာစုနှစ်အဟောင်းအစဉ်အလာများနှင့်ကိုလိုနီခေတ်ဗိသုကာလက်ရာတွေတခုအဖြစ်။ နိုင်ငံတော်များ၏အခြားအစိတ်အပိုင်းများကိုတောင်ပေါ်မြင့်မားသို့မဟုတ်သစ်တောတွေကဝိုင်းလျက်, ပြည်နယ်အားလုံးကွဲပြားခြားနားသောလူအပေါင်းတို့ဒေသများတွင်ရှငျးရှငျးလငျးလငျးဘရာဇီးဧညျ့ကိုပူဇော်နေစဉ်။
Região Metropolitana, Região Serrana, Região Norte Fluminense, Região Sul Fluminense, Região Noroeste Fluminense, Região Das Baixadas Litorâneas, Região Médio Paraíba, နှင့်အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့Regiãoကော်စတာ Verde - ရီယိုဒီဂျနေးရိုး မြို့၏ပြည်နယ်ရှစ်ခုဒေသများ၌ဝေဖန်လျက်ရှိသည်။
ထိုRegião Metropolitana မှာတည်ရှိပါတယ်, သတျခဲ့တာပါနှစ်ခုအကြား 10 ကီလိုမီတာအကွာအဝေးနှင့်အတူ, ရီယိုဒီဂျနေးရိုး မြို့မြို့ကနေကိုယ့်ကိုဖြတ်ပြီး Guanabara ဂလားပင်လယ်အော်ထဲမှာထိုင်တော်မူ၏။ သတျခဲ့တာပါ ရီယိုဒီဂျနေးရိုး မြို့မြို့ကနေအလွယ်တကူအမှန်တကယ်အံ့မခန်းများမှာအချို့သောအရာ, ယဉ်ကျေးမှုနှင့်သဘာဝဆွဲဆောင်မှု၏ကြွယ်ဝသောအမျိုးမျိုးမှနေအိမ်ဖြစ်ပါသည်နှင့်လွဲချော်မဖြစ်သင့်ပါတယ်။ araribóia, ပျေါတူဂီပြင်သစ်ကျူးကျော်တွန်းလှန်ကူညီခဲ့သူတစ်ဦးTupí-Guarani အကြီးအကဲမျ​​ားကစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးကဌာနေတိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တဦးကစတင်တည်ထောင်ခဲ့ကြမှသာဘရာဇီးမြို့ဖြစ်၏။
ဝေးကွာ ရီယိုဒီဂျနေးရိုး မြို့မြို့ကနေ, နိုင်ငံတော်အတွက်အကြီးမားဆုံးသောခရီးသွားဧည့်အကျိုးစီးပွားဒေသလည်းကော့စတာအဖြစ်လူသိများRegião Das Baixadas Litorâneas, Sol (နေရောင်၏ပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်း) ပြုကျွန်းကြွယ်ဝသောကော်စတာဗာဒီ (အစိမ်းရောင်ပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်း) တွေဟာကမ်းခြေမှအိမ်နှင့် ရေကန်များ, နှင့်ပြည်နယ်များ၏အတွင်းပိုင်းထဲမှာRegião Serrana (တောင်ထူထပ်သောဒေသများ), အိမ်ပြန်အစိမ်းရောင်တောင်ကုန်းတောင်နှင့်သစ်တောများ။
ကော့စတာ Sol ပြုပါနေစဉ်ကော့စတာ Verde ရဲ့နာမည်က၎င်း၏ပေါများမိုးသစ်တောတွေကိုရောင်ပြန်ဟပ်ဒါကြောင့်အဒေသအတွင်းအများအပြားကမ္ဘာ့အဆင့်မီကမ်းခြေ၏အမည်ပေးခဲ့သည်။ အစိမ်းရောင်ပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းထိုကဲ့သို့သော Parque Nacional da Serra da Bocaina အဖြစ်သာယာလှပတဲ့ဂေဟစနစ်ပြည်နယ်၏ပန်းခြံနှင့်အတူထိုကဲ့သို့သော Ilha Grande, Paraty နှင့် Angra dos Reis အဖြစ်မှတ်တိုင်တွင် Destinations နေရာဖြစ်သည်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါကော့စတာ Verde, တခြမ်းအပေါ်သမုဒ္ဒရာထဲရှိခြင်းနှင့်တိုက်ရိုက် facing, တစ်ဦးချင်းစီကတခြားနဲ့မတူတဲ့အတွက်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်စိမ်းလန်းစိုပြေတဲ့သစ်တောကိုတောင်ပေါ်မှာဘရာဇီးသဘာဝတရား၏ဂုဏ်အသရေအများအပြား element တွေကိုဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
Angra dos Reis စွကမ်းခြေ idylls ထံမှဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ခေတ်မီဆန်းပြားဒေသများအထိ၎င်း၏အဆင်းလှသောကမ်းခြေများနှင့်ကျွန်းများမြောက်မြားစွာပေးသောငရုတ်ကောင်းကြည်လင်ရေသည်ကျော်ကြားသည်။ အကျော်ကြားဆုံးနှင့်ဤ၏ဂုဏ်ပြု Ilha Grande, သို့မဟုတ် picturesque ကမ်းခြေစိမ်းလန်းစိုပြေအတ္တလန္တိတ်သစ်တောနှင့်တွေ့ဆုံရန်နှင့်အရက်ဆိုင်များ, စားသောက်ဆိုင်များနှင့်Caféကျော၌ထားကြ၏ဘယ်မှာ "ကြီးမားတဲ့ကျွန်းတစ်ကျွန်း" ဖြစ်၏။ ဧည့်သည်များကဒေသတွင်းပတ်ပတ်လည်နှင့်လှေကိုရွက်လှေခရီးစဉ်မွေ့လျော်ခြင်းနှင့်ကွဲပြားခြားနားအဏ္ဏဝါဘဝကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းငှာနိုင်ပါတယ်။ Angra dos Reis ကိုယ်တိုင်ကအတွက်ဆွဲဆောင်မှုသမိုင်းအလယ်ဗဟို, ကိုလိုနီခေတ်အိမ်များ, ကွန်ဗင်းရှင်း, အသင်းတော်များနှင့်ချစ်စရာကောင်းစားသောက်ဆိုင်တို့ပါဝင်သည်။
Paraty ၏ quaint ကိုလိုနီမြို့လေးတစ်ဦးအချိန်-ခရီးသွားအတွေ့အကြုံကိုသည်: သမိုင်းတစ်လျှောက်နှင့်၎င်း၏ cobbled လမ်းမ၌အလတ်စားအဆင်းလှသောဗိသုကာပညာ၏ 400 ကျော်အနှစ်နှင့်အတူကြောင့် Trindade သဲသောင်ပြင်နှင့် Sono သဲသောင်ပြင်အပါအဝင်ပြည်နယ်အတွက်အများဆုံး pristine နှင့် idyllic ကမ်းခြေအချို့နေအိမ်ဖြစ်ပါသည် ရေကူးခြင်းနှင့် snorkeling များအတွက်ကြည်လင်ပြတ်သားသောရေသည်စံပြဖြစ်သည်။ အဓိကအမြို့ကနေသေးငယ်တဲ့အကွာအဝေးကြည်နူးဖွယ်ရေတံခွန်များလည်းရှိပါတယ်။
များစွာသောရေကန်နှင့်ဂွအဲဒီမှာတွေ့ရှိပြီးနောက်အဆိုပါကော့စ်, ကမ်းခြေ၎င်း၏ 100 ကျော်ကီလိုမီတာနှင့်အတူ Sol, Região dos ဂို့အဖြစ်လူသိများ, သို့မဟုတ်ရေကန်၏အာရှဒေသတွင်းဖြစ်ပါတယ်ပါဘူး။ ဒီနေရာမှာငြိမ်းချမ်းစွာ Cabo Frio, အချောင် Arraial Cabo, အစဉ်အဆက် chic Búziosနှင့် Saquarema ၏ဘရာဇီးရဲ့ surfing ငွေအရင်းအနှီးပဲထူးခြားဆန်းကြယ်တဲ့ကမ်းခြေကိုပူဇော်သက္ကာဘို့အများအပြားကြီးမြတ်သောအရပ်, picturesque Vista နှင့်စိတ်ကူး nightspots တချို့ရှိနေပါတယ်ပါဘူး။
လှိုင်း၏ဘရာဇီးရဲ့မြို့တော်အဖြစ်လူသိများ Saquarema ရီယိုဒီဂျနေးရိုး မြို့ကနေ 100 လောက်ကီလိုမီတာအကွာဖြစ်ပါတယ်။ ဤဒေသသည်မူလကဒီကမ်းရိုးတန်းဒေသ၏ပထဝီမှုကြောင့်ရှာဖွေရလွယ်ကူသော, mollusks အတွက်အထူးပြုတဲ့သူတံငါသည်များ၏ဌာနေတိုင်းရင်းသားများ Tamoio အမျိုးအနွယ်အားဖြင့်စည်ပင်ခဲ့သည်။ ဒီမှာအနေဖြင့်ရွေးချယ်ဖို့နိူး surfing များအတွက်လေ့လာစူးစမ်း, 12 ကမ်းခြေပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်း၏ 60km ရှိပါတယ်။
Araruama ကိုRegião dos ဂို့, တက်ကြွ commerce ကိုမှအိမ်, နိုင်ငံတော်၏ဘဝအသက်တာအတွက်ချဲ့ထွင်အခန်းကဏ္ဍနှင့် famoust araruama အိုင် windsurfing များအတွက်ဂွစံပြအကြီးဆုံးမြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Araruama အတွက်မဖွံ့ဖြိုးသေးတဲ့, သဘာဝကမ်းခြေပျော်မွေ့နေဆဲ ရီယိုဒီဂျနေးရိုး မြို့မြို့တော်သို့နီးကပ်နေဖို့လိုသူတို့တွင်အစဉ်အဆက်ကပိုလူကြိုက်များတာရှည်အဖြူသဲကမ်းခြေ, အ beuatiful ဆဲလျှို့ဝှက်ချက် praia seca ဖြစ်ပါတယ်။
ရီယိုဒီဂျနေးရိုး မြို့မြို့ကနေနှစ်နာရီလောက်ပတ်ပတ်လည်တွင်တည်ရှိသော Cabo Frio, ၎င်း၏သမုဒ္ဒရာကမ်းခြေ, အဖြူရောင်သဲလုံးခုံနှင့်သမိုင်းကြောင်းအသိသာခံတပ် "ခံတပ်de Sao Matheus" ကျော်ကြားသည်။ ဒါဟာတဦးတည်းအရသာပင်လယ်စာ၏ကြီးမားကျယ်ပြန့်ခင်းကျင်းဝယ်အဖြစ်အပျော်တမ်းသို့မဟုတ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ငါးဖမ်း၏ရေတွင်း-ချစ်ရသူအတိတ်-အချိန်အတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံနိုင်မည့်အငယ်စားငါးဖမ်းကျေးရွာများ၏သိချင်စိတ်နှင့်ကျက်သရေအားဖြင့်နူးညွတ်သောသူတို့အဘို့ကျွန်းတစ်ဦးလူကြိုက်များအုပ်စုတစ်စုရှိပါတယ်။ Cabo Frio ကိုလည်းနိုင်ငံတွင်း၌ကမ်းခြေဖက်ရှင်များအတွက်အရေးအပါဆုံးအမြို့မြို့များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
ရီယို Das Ostras surfers မ​​ျားအတွက်စံပြအသက် 15 enchanting ကမ်းခြေ၏ဖွဲ့စည်းထားသောစင်ကြယ်သော, အေးဆေးတည်ငြိမ်ကမ်းရိုးတန်းတစ်ဦးရှည်ကြီး, ဝါကြွား။ ဧည့်သည်များအရသာဒေသခံအစားအစာအဖြစ်မန်များနှင့်သစ်ပင်ပန်းမန်ပေါကြွယ်ဝသောဂွ, ပန်းခြံများနှင့်သိုက်ကိုပူဇော်ရသောအရက်ဆိုင်, စားသောက်ဆိုင်နှင့် kiosk ၏ကျယ်ပြန့်စစ်ခင်းကျင်းမွေ့လျော်။ တမြို့လုံးလည်းဂုဏ်ပြုနှစ်စဉ်ကျင်းပ, jazz ပွဲတော်ကိုလက်ခံရရှိပါတယ်။
Arraial Cabo ပြုပါပဲ့ထိန်းရေအောက်ငါးဖမ်း Adventures လှိုင်းအဘို့ကမ်းခြေစံပြများအတွက်ထွက်ခွာငုပ်စက်လှေအများအပြားနှင့်အတူဘရာဇီးမှာအကောင်းဆုံးအရေငုပ်အစက်အပြောက်အချို့ကိုဟောကြားခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ Reserva Extrativista Marinha က de Arraial Cabo ပြုပါ (Arraial ၏သယံဇာတထုတ်ယူရိန်းဘေးမဲ့တော Cabo ပြုပါ) အစဉ်အလာငါးဖမ်းလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများကလူနေထူထပ်, ဒေသတွင်း၌တစ်ဦးရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ဂေဟစနစ်ဧရိယာဖြစ်ပါတယ်။
ပြင်သစ်ရုပ်ရှင်မင်းသမီးဂျစ် Bardot အားဖြင့် 70 ရဲ့ကတည်းကကျော်ကြား လုပ်. , ရေတွင်း-: အင်မတန်မြန်များအတွက်မဖြစ်မနေ-အလည်အပတ်ခရီးဟော့စပေါ့နှင့်ကစားကွင်းသာမန်အားဖြင့်ကိုယ့် "Búzios" ဟုခေါ်သည့်ဂုဏ်ပြုArmação dos Búziosဖြစ်ပါတယ်။ သာယာလှပတဲ့ကမ်းခြေနှင့်ကြီးစွာသောတွေကတော့နှင့်အတူဤသည်၎င်း၏သာယာလှပကမ်းရိုးတန်းမှ Cariocas နှင့်နိုင်ငံတကာဧည့်သည်များတဲ့ကျယ်ပြန့်စစ်ခင်းကျင်းဆွဲဆောင်, ထိုနေ့၏ဖက်ရှင်ကမ်းခြေမြို့လေးဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ Buzz နှင့်ကြော့တွေကတော့အရက်ဆိုင်, စားသောက်ဆိုင်နှင့်Búziosတစ်ဦးအောင်မြင်ကျော်ကြားပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့လူငယ်လေးတွေ getaway များအတွက်စံပြတည်နေရာကိုအောင်ကလပ်အသင်းတစ်ခုရွေးချယ်စရာများပြားဌန်ပေးထားပါတယ်။
Macaéယင်း၏ကမ်းလွန်ရေနံစက်မှုလုပ်ငန်း၏ရလဒ်အဖြစ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းခရီးသွားလုပ်ငန်းအဆင့်မြင့်လက်ခံရရှိ, ရီယိုဒီဂျနေးရိုး မြို့အတွက်အများဆုံးသာယာဝပြောတဲ့ခရိုင်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာ 800 ပြသခဲ့သည်န်းကျင်အတူတူဆောင်တတ်၏ဟူသောရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့များအတွက်နှစ်နှစ်တကြိမ်ဟာဘရာဇီးကမ်းလွန်ရှင်းလင်းပွဲအိမ်ရှင်အဖြစ်။ တမြို့လုံးလည်းကမ်းခြေတွေ, အမျိုးသားဥယျာဉ်များ, ကျွန်းများ, ကမ်းရိုးတန်းဂွ, တောင်ကြီး, ရေတံခွန်များနှင့်တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်သည်များအပါအဝင်အကြီးအကသဘာဝအလှတရား၏ဒေသများတွင်ရှိပါတယ်။
အဆိုပါregião Serrana, တဘရာဇီးအမှတ်မြို့တော်နှင့်ချစ်စရာကောင်း Nova Friburgo မှာPetrópolis၏သမိုင်းကြောင်းအနျအရေးကွီးမွို့သို့တစ်တောင်ထူထပ်သောဒေသတွင်နေအိမ်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါRegião Serrana ခရီးသွားများအတွက်ကို Serra dos Órgãosတောင်အာနုဘော်ကမ်းလှမ်းနှင့်၎င်း၏အလယ်အလတ်ရာသီဥတုကိုမှ, ဒီဧရိယာအများအပြားဧည့်သည်များတစ်နှစ်ပတ်လုံးဆွဲဆောင်။
Petrópolis, ရီယိုပြည်နယ်၏လူကြိုက်အများဆုံးနှင့်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်တောင်ထူထပ်သောနေရာတစျခုကို၎င်း, ဧကရာဇ် Dom Pedro II ကိုသူကသူ့အိမ်ပြုသောကြောင့် endearingly ကို "မှာ Imperial City ကို" အဖြစ်ရည်ညွှန်းသည်။ ဒါဟာစိမ်းလန်းစိုပြေအတ္တလန္တိတ်သစ်တောနဲ့အနုပညာ, ဂီတ, ကခုန်, ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ထုံးတမ်းစဉ်လာနှင့်အတူပဲမျိုးစုံကဝိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ခမ်းနားတောင်တန်းပေါ်ကနေအလတ်စားTeresópolis, ၎င်း၏လတ်ဆတ်အေးမြလေနှင့်မတူကွဲပြားသောသစ်ပင်ပန်းမန်, ပန်းမန်များနှင့်စမ်းရေတွင်းနှင့်အတူတှေအမြားကွီးသာယာလှပတဲ့သဘာဝကပန်းခြံများအတွက်မကြာခဏဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးကချိုမြိန်ယာဉ်, အဝတ်အထည်နှင့် အစားအစာ ဈေးကွက်ကိုလည်းခပ်သိမ်းသောတနင်္ဂနွေရာအရပျကြာတယ်။
အတ္တလန္တိတ်သစ်တောအားဖြင့်ရှုမြင်သုံးသပ်ကြ Nova Friburgo, ရေတံခွန်များ, တောင်ကြီး, မြစ်ရေနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သိုက်တွေ့ကြုံခံစားရန်ခရီးသွားလမ်းညွှန်နှင့် Trek ၏အကွာအဝေးဟောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်ကောင်းစွာ၎င်း၏အရည်အသွေးမြင့်မား pousadas, စားသောက်ဆိုင်နှင့် အစားအစာ များအတွက်ကိုချစ်၏ဖြစ်ပါတယ် - ဖွန်ဒူးနှင့် raclettes, ဆိတ် '' ဒိန်ခဲ, cookies နဲ့လုပ်ချောကလက်အပါအဝငျ။
ထို "ကော်ဖီ၏ချိုင့်၌" တွင်တည်ရှိပြီး, မှ Miguel Pereira ၏သဟဇာတသောတောင်ပေါ်မြို့ကလေး 618m ၏အမြင့်မှာထိုင်နှင့်ဘရာဇီးလ်ရဲ့အတွင်းပိုင်း၏စိမ်းလန်းစိုပြေစိမ်းလန်းသောတောင်ကြီးတို့ကဝန်းရံထားသည်။ မှ Miguel Pereira ကြောင့်အံ့သြဖွယ်ရာသီဥတုကိုအားလုံးတစ်နှစ်ပတ်လုံးပေးခြင်း, မျှမျှတတနဲ့မြင့်မားတဲ့အောက်စီဂျင်အဆင့်ကိုရှိပါတယ်။ ယင်း၏ luscious ရာသီဥတုကိုအဘို့အကျော်ကြား, ဤမြို့ကိုတစ်ရာသီဥတုအပန်းဖြေစခန်းအဖြစ်ကြေညာခဲ့ပါတယ်, အခုတရားဝင်ကမ္ဘာအတွက် 3rd တာအကောင်းဆုံးရာသီဥတုကိုအဖြစ်မှတ်, ဘရာဇီးအတွက် 2nd, အကောင်းဆုံးသောနှင့် ရီယိုဒီဂျနေးရိုး မြို့၏ပြည်နယ်အတွက်အကောင်းဆုံး။
ရီယိုဒီဂျနေးရိုး မြို့ပြည်နယ်တစ်လျှောက်လုံး, အမာတာatlânticaရဲ့အပူပိုင်း sub-အပူပိုင်းသစ်တောများဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများနှင့်အတူ teeming ကြသည်။ သစ်ပင်ပန်းမန်များနှင့်မန်များမျိုးစိတ်ဟာသူ့ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်မျိုးစိတ်Região Serrana ဂြိုလ်ပေါ်တွင်အများဆုံးကွဲပြားခြားနား၏တစျပါစေ။
ရီယိုဒီဂျနေးရိုး မြို့မှ လာ. , ဒေသတစ်ခုထပ်ဆောင်းဘက်တွေ့ကြုံခံစားချင်သူတွေအတွက်, တစ်ဦးတစ်ရက်လည်ပတ်သို့မဟုတ်တစ်ပါတ်-အဆုံးအထိရောက်ရှိခဲ့သည်ကိုအလွယ်တကူဆွဲဆောင်နှင့်တစ်ခုအကွာအဝေးရာပူဇော်သက္ကာကိုအများအပြားအနီးအနားနေရာများရှိပါတယ်။
ထိုကဲ့သို့သောရီယို Das Ostras နှင့် Cachoeiras က de Macacu ၏ရေတံခွန်များအဖြစ်လျော့နည်းလူသိများတည်နေရာများကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုရန်အံ့သြစရာကောင်းတဲ့နေရာများနှင့်ရောနှောဘရာဇီးနှင့်နိုင်ငံတကာနှစ်မျိုးလုံးဧည့်သည်များနှင့်အတူ ပို. ပို. လူကြိုက်များဖြစ်လာကြပါတယ်။
ရီယိုရဲ့ခရီးသွားဧည့်စက်မှုလုပ်ငန်းအဆက်မပြတ်ပြောင်းလဲနှင့်ပြည်နယ်၏အသီးအနှံများနှင့်ရေရှည်တည်တံ့ဖွံ့ဖြိုးရေး၏အခြေခံအကျဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်။ အခြားသူများသဘာဝနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ပညာရေးသို့မဟုတ် High-end ကမ်းခြေလိုက်မယ်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်နေစဉ်စွန့်စားလေ့လာရေးခရီးကိုပူဇော်အချို့သောနိုင်ငံတော်တစ်ဝှမ်းသွားလာရန်ဆက်ကပ်အပ်နှံသည့်ကုမ္ပဏီများ, တစ်သိသိသာသာနံပါတ်, ရှိပါတယ်။ တစ်သမဝါယမနှင့်အကျိုးရှိစွာလမ်းအတွက်ခရီးသွားလုပ်ငန်းနယ်ပယ် functions များကြောင်းသေချာစေရန်, များစွာသောအများပြည်သူအဖွဲ့အစည်းများကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအကြားအပြန်အလှန်ဆက်ဆံရေးများလွယ်ကူချောမွေ့နှင့်ထိတွေ့မှုမြှင့်တင်ရန်ဖို့အရေးကြီးတယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအခြေခံအဆောက်အဦများကြီးကြပ်ကွပ်ကဲ။
I LOVE RIO အသစ်နှင့်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ခရီးသွားလာခွင့်အလမ်းများကိုတံခါးဖွင့်လှစ်, ရီယိုဒီဂျနေးရိုး မြို့ပြည်နယ်အနှံ့အများအပြားမြို့ကြီးများ၏အနုပညာ, ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ခရီးသွားဧည့်ဆွဲဆောင်မှုအလေးပေးဖော်ပြသည်။
ထိုကဲ့သို့သော Paraty နှင့် Ilha Grande အဖြစ်မှတ်တိုင်တည်နေရာများကိုထိုကဲ့သို့သော Cachoeiras က de Macacu အဖြစ်က hidden ကျောက်မျက်များက စုပေါင်း. Contra ဖြစ်ကြ၏။ အခွားသောရတနာBúzios, Macaé၏စီးပွားရေးအရချမ်းသာကြွယ်ဝနှင့်ထင်ရှားသောမြို့, Nova Friburgo ၏ရေတံခွန်များ, တောင်ကြီး, မြစ်ရေနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သိုက်ကို၎င်း, လတ်ဆတ်အေးမြလေနှင့်Teresópolis၏သာယာလှပသောသဘာဝဥယျာဉ်၏ဖက်ရှင်ကမ်းခြေမြို့ကလေးပါဝင်သည်။